Njem ezumike azụ-azụ na Lanzarote - Ụgbọ ala ụgbọ ala UK | Jiri UK Car Rental ala - Cheap Rent a Car USA
Dị ka otu n'ime Islands Canary Islands kacha eleta ebe, Lanzarote nwere ezigbo ebe ntụrụndụ na ebe nkiri ndị na-eme ka ọ bụrụ ebe a maara dịka ebe dị mma maka ndị na-emefu ego, ezinụlọ na ndị na-eto eto na-ewepụ ezumike onwe ha nke mbụ site na mama na papa. Ma, site na ebe kachasị anya, ebe ndị obodo na obodo nta dị na Lanzarote agbanwebeghị kpamkpam, nke a na-eme ka ha bụrụ ezigbo mmasị nye ndị chọrọ udo ezumike na ebe mara mma.
Obodo nta a na-azụ azụ na-anọdụ n'ebe ugwu nke ụsọ oké osimiri nke agwaetiti ahụ ma bụrụ ebe zuru oke ka ọ bụrụ na ịghaghachi azụ ma nwee udo na ịnọ jụụ. E nwere ọdụ mmiri nke a na-eme ka ọ daba na ya, ọ bụrụ na ịchọrọ ịjụ oyi, ị nwere ike ịbanye n'ime mmiri dị ọcha maka igwu mmiri, ma ọ bụ ịkwọ ụgbọ mmiri. E nwere ụfọdụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ ndị na-esi nri maka ebe a, ma ihe dị mkpa bụ ihe pụrụ iche, ebe obibi nke ebe obibi na-enwere nanị minit iri na-aga n'èzí obodo. Ụlọ ezumezu Finca de Arrieta nwere ihe ọmụma nke ichekwa ebe obibi na ebe obibi nke Lanzarote, ya mere, n'etiti nhọrọ nke onwe ma ọ bụ nke a na-akọrọ na ebe obibi ma ọ bụ ebe obibi, ị ga-ahụ ọdọ mmiri dị ọkụ, 'ụlọ ahịa n'eziokwu' maka ndokwa ọ bụla ị chọrọ na ụdị nri na mmanya dị iche iche nke obodo na-ele ugwu anya n'otu akụkụ na oké osimiri dị na nke ọzọ. Obi ụtọ!
Obodo a nke dị na Timanfaya National Park ka a na-akpọ aha ya 'Obodo kachasị mma na Spain'. Ndi mmadu kariri 300 bi ebe a ma nke a putara na site na onodu eleta njem, enweghi obere ime, ma oburu na icho anya iga ebe zuru oke zuru oke. Ruo ụbọchị ole na ole, ịnwere ike ịga n'ụsọ oké osimiri nke dị nanị minit iri ma ọ bụ maka ihe pụrụ iche, nke dị n'ime Timanfaya ma gaa na El Diablo Restaurant nke na-eji ọkụ si n'ugwu ahụ na-esi nri gị. Site na ebe a, ị ga-enweta echiche panoramic nke ogige ahụ n'onwe ya ma nwee ike ịnụ ụtọ ebe ọdịda anyanwụ si n'ebe ọ bụla n'ime ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị okirikiri ka ị na-eri nri.
N'okpuru ebe ugwu nke agwaetiti a, obodo a na-enweta ụfọdụ n'ime oke osimiri ndị kasị mma, nke na-acha ọcha ájá nke dị iche na ájá ájá nke Southern Southern, mana ma eleghị anya, ọ kachasị mkpa, ndị a bụ ụfọdụ n'ime ógbè kasị dịrị jụụ. Mmiri ndị na-emighị emi bụ nke doro anya na obodo ahụ dị jụụ, ma ọbụna karị ka agwaetiti La Graciosa bụ nke dị nanị ụgbọ mmiri nkeji iri abụọ. Obere agwaetiti a enweghị ụgbọala, ọ dịghị okporo ụzọ ma ọ bụ nanị narị mmadụ ole na ole, na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime ebe ndị kasị dịrị jụụ na Canary. Enwere ike ịchọta njem nleta na 4 × 4 jeeps, a pụkwara ịchọta ebe a na ọdụ ụgbọ mmiri nke Caleta de Sebo ma ọ bụrụ na ị kpebie ịchọrọ ịnọ n'abalị. Jide n'aka na ọ bụrụ na ị nọ ebe ahụ mgbe anyanwụ dachara, ị na-echeta iji anya, enweghị ìhè na mmetọ na ebe a na-eme ka kpakpando-na-ele ihe na-eme.
Ị na-anọ n'ebe ọ bụla dịpụrụ adịpụ ma ọ bụ ebe udo dị na Lanzarote nke ị ga-akwado? Anyị ga-enwe mmasị ịnụrụ ndụmọdụ gị wee nwee ike ịhapụ iziga ha na foto ọ bụla ma anyị ga-ahụ na ha ga-agbakwunye na nduzi anyị na foto foto anyị!
Comments Off na Na-azụ-azụ ezumike na Lanzarote
Ịgafe n'akụkụ nke ọzọhttps://i0.wp.com/www.carrentalchoice.com/wp-content/uploads/2017/12/cross-internation-car-hire.jpeg?resize=600%2C800&ssl=1